“Ny Vatana no Maty, Fa Tsy Ny Firenena”: Izay Nesorin’ny Olan’i Venezoelà Tamintsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Avrily 2017 6:04 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Ελληνικά, Español
Sariitatra avy amin'i Eduardo Sanabria (Edo Ilustrado). Maribolan'ny sary: Mba afaka mahazo kafe ve aho azafady? Sary nahazoana alàlana.
Famerenana ny fanontàna lahatsoratra iray an'i Luis Carlos Díaz, navoaka voalohany tamin'ny teny Espaniola tao amin'ny Medium ity manaraka ity ary nomeny alàlana haverina hivoaka etoana.
Isanandro vaky izay anohizan'i Venezoelà miaina eo ambany fitondràn'ny governemanta Chavisma, izay efa teo amin'ny fitondràna nandritry ny 15 taona mahery, dia mikororosy hatrany hatrany ny firenena. Ary mbola hitohy hikororosy satria, mifanohitra amin'izay lazain'ny maro, tsy misy ny teboka fitsaharana : firenena tsy manana fototra.
Mba marina moa. Taona roa lasa izay, toy ny efa tratran'ny zavatra rehetra sahady ny fetram-paharavàna, saingy tsy nisy resaka ihany momba ireo olona mitady izay harapany any anaty fioeram-pako. Ankehitriny, tsy hoe io ihany no karohin-dry zareo, fa miady mihitsy izy ireo hahazoana izany. Rahampitso dia horaofin-dry zareo hiala eo io, na hampandoavin'ny fanjakana sazy izay rehetra manipy fako ao… na iza koa no mahafantatra izay zavatra hafa mbola ho ataony eo.
Tsy resahan'ny olona ny momba ny fandrobàna, tahaka izay efa mahazatra azy rehetra ihany. Tsy resahan'izy ireo ihany koa ny momba ireo vonoolona miharo heloka bevava tsy mandalo fitsaràna, izay fomba entin'ireo vondron'ny mpiray vodirindrina mamaly ny fandikandalàna ao anatin'ny heloka tafahoatra tahaka izany. Tsy misy fanamarihana momba ireo olona voatetitetika, izay efa porofon'ny firongatry ny herisetra an-tanàndehibe tato anatin'ny taona vitsy. Tsy resahana intsony ny momba ireny zavatra ireny. Tsy hoe satria efa niato tsy nisy intsony izy ireny, fa satria efa lasa toy ny fenitra sy tafiditra tanteraka ao anatin'ny tontolo iainan'ny firenena sy ny olana atrehany.
Ny Vatana no Maty, Fa Tsy Ny Firenena. Mivaralila ny zavatra rehetra, saingy mety vao mainka ho ratsy lavitra. Afaka manolotra ohatra an-taonina maro isika ho entina manaporofo izany, saingy hifantohantsika ireto roa ireto: ny fidangan'ny vidimpiainana manerana izao tontolo izao tato anatin'ny dimy taona nifanesy ary ny fitontongan'ny taham-pamokarana tato anatin'ny fotoana fohy amin'ny tantarantsika ankehitriny. Ny meloka amin'io dia ny fihariana ara-toekarena avangongo aminà toerana iray sy ireo fifehezana napetraky ny Chavisma mba hampitomboana ny fatran-kolikolin'izy mianakavy. Afaka miteny ianao hoe io olana ara-toekarena io dia ampahany amin'ny tetidratsin’ireo mpanao afera sy mpaninjara, fa efa nisy ve olona nifanehatra taminà mpaninjara iray afaka nangorom-bola tao anatinà tranga iray izay tsy nahafahany nivarotra?
Ny fieritreretana, toy ny lazain'ny maro, hoe misy mpanohitra mangetaheta fitondràna, tsy izao fa atsy aoriana kely, mba hahafahan'izy ireo miala amin'ny fiantsorohana ny sanda mety ateraky ny fakàna fahefana izao dieny izao dia toy ny raharahan-jazakely. Ny sandan'ny fananrenana ny firenena fotsiny no hitombo. Ny hetaheta handray fahefana iray voahongana na fari-piadidiana iray dia tsy misy ilàna azy toy ny maha-tsy misy ilàna ny fanohizana hetsipanoherana ataon'ny mpanohitra.
Androany ny firenena tsy afaka mamahana ny vahoakany, ary rahampitso mbola ho ratsy lavitra noho izay, araka izany dia arakaraky ny hafainganan'ny fiovàna drafi-pamokarana, ny fihariana mivangongo aminà toerana iray, ny lalao maloton'ny kolikoly amin'ny fifandimbiasam-pitondràna, ny vidin-javatra sy ny fitsinjarana, no hanamaivana ny sandan'ny fakàna ny fahefana. Tsy afaka manefa ny trosany i Venezoelà, noho izany dia tsy ho ela, hisy ny fiovàna mpitondra ary averina ifampiraharahàna ireny trosa ireny, ny tsara indrindra hoan'ny rehetra.
Kanefa, mba hahafahana mamerina ireo andrim-panjakana sasany, misy fepetra vitsivitsy ilaina, saingy mila fotoana izany. Ilaina ny antoka hoe mba haharitra izay governemanta manaraka eo. Satria raha vondrona iray mpandraharaha aminà resaka zavamahadomelina, politisiana mpanao kolikoly ary ireo mpampijaly no tonga eo amin'ny fitondràna, mbola ho ratsy lavitra ry zareo miasa avy amin'ny fanoherana miaraka aminà vola nangalarina. Izany no antony maha-zavadehibe ny fahazoana fanovàna sasantsasany ao anatin'ny Filankevitra Nasionaly Misahana ny Fifidianana. Mety ho ilaina ny fitomboan'ny fandaniana ho an'ny Tafika Mitam-piadiana na ny Fitsarana Faratampony. Mety hanampy ny famahàna ny satan'ny Antenimieram-Pirenena. Saingy tsy misy antoka mihitsy na kely aza. Fantatrareo izany, fantatro. Tsy manana boky torolàlana momba ny fomba hiainana ambany jadona iray isika.
Ankehitriny, amin'ìzao mihitsoka izao ny zavatra rehetra, ny zavatra maika dia ny fomba hiakarana eo amin'ny fitondràna aloha. Izay no antony ifanakalozana hevitra momba ny raikipohy ary dia misy ny tsy fitoviana hevitra. Ny nahataitra ahy dia ny fomba nahavery ny tsirairay, tafiditra amin'izany ireo izay niresaka tamin-kery sy fanànana antoka, satria na ho azy ireo aza, dia halaky hirodana ilay “drafitra tsy misy tomika” ninoany ho tafita.
Izany no antony ifamelezan-dry zareo na anondroany ny mpifanandrina aminy, satria mora kokoa izany; satria raha apetrakareo eo amin'ny fitondrana ry zareo dia hanomboka hitsingilahila. Nokarakaraina ny diabe iray, nefa tsy haintsika izay hitranga manaraka eo. Mifanehatra aminà mandà fiarovana ny hetsi-panoherana iray, fa aorian'izay, tsy misy mahafantatra izay hiseho afaka segondra fohy. Toy ny fikomiana ny fanehoana tsy fankatoavana, saingy avy eo tsy misy dikany. Ary toy ny zava-mandalo ihany ny maro an'isa avy amin'ny mpanohitra: hanohana anao ny maro an'isa raha toa ka am-pilaminana ilay olana. Raha tsy izay, hisintaka ry zareo ary hiala, satria azo antoka ny fiantohana ary fantatry ny maro fa ambony lavitra noho ny an'ny jiolahimboto ny ain'izy ireo.
Midika izany, somary mahazendana ihany, fa ireo izay manao be noho ny hafa no eny amin'ny loha-laharana amin'ny fifanakalozankevitra, mitàna anjara toerana maro, na voaompa aza. Eo fotsiny tsy mahalala izay hiseho manaraka eo ry zareo, amin'ny fampiasàna ny fomba fiteniny na dia hiteraka fanebahana avy amin'ny mpanohitra aza.
Nefa, mbola mahaliana kokoa, tsy afaka ny hitsahatra tsy ho faly isika, satria mbola mila bebe kokoa ry zareo raha ny marina. Satria tsy misy ilàna azy ny kabary tsy valiana. Satria ny olona tsy afaka hitsahatra tsy hitaky. Satria ireo firenena hafa mety te-hanampy saingy tsy mahay hoe amin'ny fomba ahoana, satria lafo loatra ho azy ireo koa ilay izy. Satria ratsy foana isanandro, kely no mba azontsika anoherana isanandro, ary ny fandaniana fotoana dia fanariana izay mety ho fiainantsika ary efa nanilika antsika ny tsy refesimandidy.
Adintsaina tsotra no tiantsika. Mba te-ho leo kely fotsiny isika. Te-hahazo antoka iray hafa ankoatra ny hoe ho ratsy kokoa ny rahampitso. Mba hanovàna azy fotsiny.
Vakio ihany koa ny fandrakofanay manokana: What Is Happening in Venezuela (Inona no mitranga ao Venezoelà?